AMOLED Display က LCD Display ထက် ပိုကောင်းတာ သေချာသလား? – MyTech Myanmar
AMOLED Display က LCD Display ထက် ပိုကောင်းတာ သေချာသလား?
လက်ရှိ စမတ်ဖုန်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ Screen Display တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် LCD နဲ့ AMOLED Panel ဆိုတာတွေက အမြဲတမ်းပါနေမှာပါ။ အများစုက AMOLED Display တွေကို ပိုကြိုက်ကြပေမယ့် အချို့ကလည်း LCD Display ကိုပဲ ပိုပြီး သဘောကျတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် AMOLED Display နဲ့ LCD Display ဘာတွေကွာခြားပြီး ဘာကပိုကောင်းသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
LCD တွေမှာ အနောက်ကနေ Backlight ပေးရတဲ့အတွက် အနက်ရောင်မှာဆိုရင်လည်း အနောက်က မီးအလင်းရောင် အဖြူတွေပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် LCD Display က ထွက်လာတဲ့ အရောင်တွေက ပိုပြီး သဘာဝကျတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဖုန်းတွေမှာလည်း IPS – In-Plane Switching လို့ ခေါ်တဲ့ ဘေးစောင်းကြည့်လည်း မြင်ရတဲ့နည်းပညာတွေကို သုံးလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုမေးခွန်းက ဖြေရတော့ အနည်းငယ်ခက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် AMOLED နည်းပညာက LCD ထက်ပိုပြီး အဆင့်မြှင့်တဲ့အပြင် နေရာတော်တေ်ာများများမှာလည်း ပိုပြီးကောင်းမွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိတောင်လည်းဆိုရင် AMOLED ရဲ့ တောက်ပပြီး အရောင်တွေစိုပြေနေတဲ့ Display က LCD Display ကို မှေးမှိန်သွားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အခုလောလောဆယ်အထိတော့ LCD Display တွေက အရောင်ပိုပြီး သဘာဝကျတယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့အတွက် သဘာဝဆန်တဲ့အရောင်တွေလိုချင်ရင်တော့ LCD Display ကအဆင်ပြေမှာပါ။
MyTech Myanmar2018-04-30T17:17:21+06:30April 30th, 2018|Mobile Phones|